कमला घिमिरे र अलिफ खानको पहिलो भेटमै चल्यो कडा दोहोरी, कमलको गीत कस्ले डिलिट गर्यो युटुबबाट ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
June 24, 2021 AdminLeaveaComment on कमला घिमिरे र अलिफ खानको पहिलो भेटमै चल्यो कडा दोहोरी, कमलको गीत कस्ले डिलिट गर्यो युटुबबाट ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
काठमाडौँ । दोहोरीमा अब्बल धादिङकी कमला घिमिरे यतिबेला सामाजिक संजालमा भाइरल बनेकी थिइन् केहि समय अगाडी । सानै उमेरमा लाइभ दोहोरी गाएर सबैलाई चकित बनाएकी कमलाको चर्चा ह्वातै बढेको थियो। छिनभरमै दोहोरीको टुक्का फुराउने कमलाको कला देखेर सबै चकित पर्थे ।
प्रख्यात गायक गायिकालाई समेत दोहोरीमा टक्कर दिने क्षमता भएकी कमला अहिले सबैको हाईहाई बनेकी बन्दै दोहोरी गाउन खप्पिस कमलाको स्वर पनि ज्यादै मिठो र सुरिलो छ। यसै क्रममा उनले गएको गीत अहिले युटुबबाट हटाइएको छ तर करना के हो कमल यसो भन्छिन । यसै क्रममा अलिफले तीन दर्जन बढी गीतको अफर आएको बताए ।
उसो त अलिफ संगीत समेत भर्छन् । अलिफको संगीतमा गायक प्रमोद खरेलले गीत रेकर्ड गराइसकेका छन् । अलिफ जस्तै, पछिल्लो केही महिनादेखि ९ बर्षिय बालक सचिन परियार पनि चर्चामा छन् । उनी पनि एक युटुब च्यानलमा अन्तरवार्ता दिएपछि नै भाइरल भएका हुन् । यी २ बीच कडा घमासानको भिडियो यहाँबाट हेर्नुहोस्ः